Ukuxoxa ngevidiyo nge-random interlocutor
Ngosizo lensiza enjalo njengokuthi "Ingxoxo yevidiyo ne-interlocutor engavamile" ungaxoxa usebenzisa ikhamera yewebhu nomuntu kusuka kunoma iyiphi indawo yeplanethi yethu ngesikhathi sangempela. Uma lokhu kukhishwa kukhanga abasebenzisi bale hlelo ngokungajwayelekile kwayo, ngoba kuyathandeka kakhulu ukuxhumana nomuntu kusuka kwenye idolobha noma ngisho nezwe.
Ukuze usebenzise izingxoxo ezithile zevidiyo, ucelwa ukubhalisa, okuthatha imizuzu embalwa yesikhathi sakho. Ngaphambi kokubhalisa, ungajabulela ukuxoxa ngekhamera yewebhu!
Ingxoxo ye-TOP kakhulu kunazo zonke. Azikho izikhangiso. Kukhona imodi ye-Premium. Ungakhetha ama-interlocutors emizini nakwamanye amazwe. Awu, angisho ukuthi lapho ungathenga ikhodi uphinde unikeze ukufinyelela kokuqala kwe-Premium.
Kukhona ingxoxo yombhalo kanye nenqwaba yemibuzo yamantombazane namantombazane.
Ingxoxo ye-GYR-GYR! Ingxoxo yevidiyo isekelwe ku-injini ye-classic evela ku-mail.ru, ifakwe nje ekhasini. Leli khasi libekwe njengengxoxo ye-Kazakh yevidiyo, kodwa akekho ophazamisa ukuthola i-interlocutor evela eRussia noma e-Ukraine. Iwindi elula yokubuka i-interlocutor, inkinobho ye-alamu, konke kufanele kube njalo.
Le ngxoxo ingxoxo yevidiyo yamaRashiya evamile futhi iyindlela yokuxhumana kwentsha yanamuhla. Le ngxoxo ilula ngokwanele. Amawindi amabili avumela ukuthi uzibonele wena nomxhumanisi wakho esikrinini sokuqapha kwakho. Okulandelayo, kukhona iwindi lokuthumela umlayezo kumuntu oyedwa noma omunye.
Futhi, ungabhala ubulili bakho, nobulili be-interlocutor oyifunayo, bese ukusesha kuzokhawulelwa kudatha oyinikezile.
Leli sayithi likunika ithuba lokuxhumana nekhamera yewebhu ngesikhathi esifanayo ne-interlocutors eziningana ngaphandle kokubhaliswa. Kulesi sayithi ungakhetha i-avatar yakho, ucacise ubulili, iminyaka nobudala. Ngemingcele efanayo, ungakhetha i-interlocutor.
Leli sayithi kanye nayo yonke enye ingxoxo yevidiyo ikunika ithuba lokuxoxa nabantu abasha abathakazelisayo kusuka kunoma yimuphi umuzi weplanethi yethu. Leli sayithi kufanele ushiye, uma ungaqapheli ukuvumela ukufinyelela kumakrofoni nakumakhompiyutha wewebhu kwikhompyutha yakho. Ukuze ubhalise kule sayithi, udinga ukufaka ikheli lakho le-imeyili futhi unikeze iphasiwedi yokungena ngemvume, bese ungakhetha i-interlocutor enentshisekelo.
Leli sayithi linemithetho yalo, ngakho-ke, kuyadingeka ukuba ujwayelane nabo, ukuze ungaphazamisi. Ungaphinda ungeze abangani oyithandayo kubangani bakho, ubakhuthaze, okungukuthi, ukuncoma, noma ngokuphambene nalokho, ukukhononda ngokuziphatha okungahambi kahle kumongameli wesayithi.
Le ngxoxo yevidiyo yafa ..
Lolu hlelo lokusebenza "Ingxoxo yevidiyo ne-interlocutor ejwayelekile" ikusize ukuthola abangane abasha noma nje ujabulele isikhathi sakho. Konke okwakudingeka kuwe kwakuwukuxhuma ikhamera yewebhu bese ucindezela inkinobho "qala". Ngemuva kwalokho, uhlelo lokusebenza olukhethiwe kuwe. Uma lo mlingani engakuthandi, ungase uqhubeke ufuna omunye umuntu.
Lolu hlelo lokusebenza alunawo omengameli, ngakho-ke kulokhu ngeke ukwazi ukuzivikela ezigciniwe ezingabonwa ngabantu abangaphezu kweminyaka engu-18 ubudala. Njengalawo wonke amakamelo okuxoxa, ungashintsha ngokushesha imiyalezo.
Lolu hlelo lokusebenza lubuye lwafa, futhi abantu basuka kulo baya kwamanye amasevisi.
Le vidiyo ihloselwe ukuxhumana nge-webcam. Akukho okungafani - amawindi amabili wevidiyo, iwindi lokuthumela imilayezo ku-interlocutor, kanye nekhono lokufuna i-interlocutor entsha. Kulula futhi kulula ukuyisebenzisa futhi akudingi ukubhalisa kwangaphambi.
Videochat - roulette, ikunika ithuba lokuxhumana nabantu abasha, ngaphandle kokushiya ikhaya lakho. Ngemva kokubhalisa kusayithi, ungaqala ukuxhumana ngokuchofoza inkinobho "yokusesha i-interlocutor". Futhi kule sayithi ungabuka amaphrofayli womsebenzisi wevidiyo, okuzokwenza kube lula ukukhetha i-interlocutor.
Leli sayithi laklanyelwe ngesiNgisi, ngakho-ke, abasebenzisi abangenalo ulwazi lwesiNgisi bazothola kunzima ukuqonda izingxenye zengxoxo yevidiyo. I-Videochat kanye nayo yonke into ikuvumela ukuthi ushintshe imiyalezo, futhi ubone i-interlocutor ngesikhathi sangempela.
Ingxoxo yevidiyo "Masikhulume" ikuvumela ukuthi ukhulume nabantu abangeke bajwayele kusuka kunoma iyiphi indawo yeplanethi yethu. Ungakwenza lokhu ngengxoxo, imakrofoni noma ikhamera yewebhu. Isevisi yalesi sayithi ilula, futhi ayidingi ukubhaliswa kanye nezilungiselelo zengxoxo ezengeziwe.
Ngokuchofoza inkinobho ethi "thola i-interlocutor" ungaqala ukuxhumana. Futhi, "Masikhulume" inikeza nokuxhumana kubasebenzisi be-Vkontakte, kodwa lokhu kuzodingeka ubhalise kulokhu. Ukuxhumana kule sayithi kulula futhi kumnandi!
Le ngxoxo ilingana neRussia efana ne-roulette chat, isevisi ethandwa kakhulu yokuphola okusheshayo kwevidiyo. Akulula ukurejista ngaphambi kokuqala ukuxhumana, futhi uma ungavumeli ukufinyelela kumakrofoni nakwi-webcam - kuzodingeka ushiye leli sayithi.
Ngokuvamile, ingxoxo ilula futhi kulula ukuyisebenzisa, ayikho into engafanele kusayithi, ngakho-ke oqalayo uzokhipha kalula idivayisi yokuxoxa ye-roulette.